I-FAQs -VTECH CHINA Co, Ltd.
Ewe, ubuncinci be-oda ubungakanani bemaski enokulahlwa rhoqo ziiziqwenga ezingama-5000.
Ndingayithenga iisampula zokufaka iiodolo?
Ewe, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Kutheni ukhetha iVTECH?
Sinezinto ezi-5 eziphambili ngokubaluleka:
1) Ingcali yokulahla ebusweni i-Mas95.
2) Amaxabiso afanelekileyo, nika izaphulelo ngobungakanani beodolo.
3) Unokulungiswa ngokweemfuno zakho.
I-4) Iwaranti esemgangathweni kunye nenkonzo ethengileyo emva kwentengiso.
5) Imigca esebenzayo yokuvelisa kunye neninzi yemveliso ezinzileyo.